अमेरिकामा पहिलो चरणमा ६४ लाखलाई खोप दिइने- विश्व - कान्तिपुर समाचार
अमेरिकी सरकारको ‘अपरेसन वार्प स्पिड’ का प्रमुख अप्रेसन अधिकृत जनरल गुस्ताभ पर्नाले डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा झन्डै खोपको ४ करोड डोज उपलब्ध भइसक्ने बताए । उक्त तथ्यांकमा मोडर्नाले तयार पारेको खोप पनि समावेश छ । गत साता निकै प्रभावकारी रहेको भन्दै विवरण सार्वजनिक भएकाले मोडर्नाको खोपलाई पनि आपतकालीन प्रयोगमा ल्याइने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको पर्नाले बताए ।
फाइजरको खोप निकै चिसो अर्थात् माइनस ७५ डिग्री सेल्सियसमा राख्नुपर्ने जनाइएको छ । जसका कारण कम्पनीले १५ दिनसम्म खोपलाई सुरक्षित राख्न मिल्ने गरी विशेष भण्डारणको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।
पर्नाले सबै अमेरिकी राज्यहरूलाई जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक रूपमा खोप वितरण गरिने पनि जनाए । ‘संघीय सरकारले कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्नेबारे सिफारिस गर्नेछन्, जसमा सम्भवतः वृद्ध, उच्च जोखिम र अग्रणी कामदारहरू रहनेछन्,’ उनले भने ।
प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ ०९:०३
हामी आफैं अपमानित हुने गरी पुरुष सदस्यलाई टाउकामा टेकाउँछौं अनि भन्छौं, ‘हामी हेपियौं, हामी पेलियौं ।’
मंसिर ११, २०७७ रामेश्वरी पन्त
पछिल्लो समय ‘चाडबाडमा महिलाका व्यस्तता’ बारे बहस चल्ने गरेको छ । केहीले यसबारे कलम पनि चलाउने गरेका छन्, जसमा महिलाहरू चाडबाडमा घरभित्रकै काममा घोटिनुपरेको र चाडबाडको आनन्द र रमाइलोचाहिँ पुरुषहरूको भागमा परेका गुनासाहरू प्रशस्तै हुन्छन् ।
युगले कैयौं कोल्टे फेरिसक्दा पनि किन महिलाहरूको भागमा भातभान्सा र चुलोचौका नै परिरहेको छ ? गृहिणी महिलाको त कुरै छोडौं, किन पुरुषसरह घरबाहिरको काममा खटिने र समानस्तरमा काम गर्ने ‘जागिरे’ महिलाहरू पनि घरभित्रको कामको भारी आफ्नो मात्रै थाप्लोमा बोक्न विवश छन् ?
नेपाली समाजमा, प्रायः बाहुन–क्षत्री परिवारमा घरभित्रको काम महिलाहरूकै जिम्मा हो भन्ने सोचाइ छ र पुरुषहरूले खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, लुगा धुने गरे इज्जत जान्छ भन्ने मानसिकता छ । तर यो मानसिकतालाई भत्काउने हिम्मत गर्नु त परकै कुरा भयो, झनै यसलाई जोगाउने र उकेरा दिने काम महिलाबाटै भइरहेको हुन्छ । हामीले घरबाहिर निस्केर पुरुषसरह पढ्ने, जागिर खाने हिम्मत त गर्‍यौं तर घरभित्रका कामको बाँडफाँट गर्ने हिम्मत अझै गर्न सकेका छैनौं । घरका पुरुष सदस्यलाई हामी भान्साको काम गर्न दिन चाहँदैनौं । कसैले आफूखुसी भान्साको काम गर्न खोज्यो भने पनि भन्छौं— त्यहाँ फोहोर भयो, त्यहाँ पानी पोखियो, त्यो यस्तो भयो, त्यो उस्तो भयो, भैगो म आफैं गर्छु... । अनि हामी बिहानदेखि साँझसम्म एक्लै भान्सामा व्यस्त रहन्छौं । बिहानै उठेर सबैका कोठाकोठामा चिया–नास्ता पुर्‍याउँछौं तर आफूले एकै छिन बसेर चिया पिउने फुर्सद पनि निकाल्न सक्दैनौं । बिहान उठेर घरका कुनै पुरुषलाई भन्न सक्दैनौं, ‘म फलानो काम गर्दै छु, तिमीहरूले चिया बनाएर खाओ, मलाई पनि देओ ।’ यति भन्न नसके पनि ‘चिया तयार छ, आएर लैजानू’ भन्दैनौं हामी ।
अरू त अरू, जागिरे महिलाहरू पनि कतिले भन्ने हिम्मत गर्दा हुन् आफ्ना पति, छोरालाई कि, ‘कसैले तरकारी काट, कसैले चिया खाएका कप सफा गर’ ? हामी पुरुषलाई भन्ने हिम्मत गर्दैनौं, ‘आफूले खाएका भाँडा आफैंले माझ्ने गरौं ताकि मलाई कामको धपेडी नपरोस् ।’ किनकि, हाम्रो दास मानसिकताले सधैं पुरुषको मानमनितो गर्न रुचाउँछ । बरु मनमनै भुतभुताउँछौं, ‘घरको सारा काम मैले एक्लै गर्नुपर्छ ।’ तर आवाज निकाल्न सक्दैनौं । घरमा छोरी पनि छ भने आमाहरू आफ्नो भागको काम छोरीलाई बाँडिदिन्छौं र भन्छौं, ‘छोरी ! बुबा, काका, दाइ, भाइलाई चिया बनाएर लगिदे, तरकारी केला, भाँडा माझ्... ।’
तर छोरालाई यो सब भन्दैनौं किनकि ऊ ‘छोरामान्छे’ हो । चाहे छोरा र छोरीको समान पढाइ होस् वा योग्यता, हामी छोरालाई मान दिन्छौं भने छोरीलाई काम । न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा अर्डेनले देशको शासन सम्हालेकी छन् भने उनका पति पार्थर क्लार्क गेफोर्डले घर । दुवैले एकअर्कालाई सम्मान गर्छन्, एकअर्काका काममा गर्व गर्छन् । दुवै अत्यन्त खुसी र सुखी देखिन्छन् । जेसिन्डा भन्छिन्, ‘गेफोर्डले हाम्रा सन्तानको हेरचाह गरिरहेका छन् ।’ यति बेला यो जोडी विश्वकै नजरमा परेको छ । सन्तान हुर्काउने जिम्मा आमाको मात्र होइन भन्ने कुरा यी जोडीबाट सिक्न सके हाम्रो समाजका बाबुआमा पनि कति खुसी र सुखी हुन्थे होलान् !
हामीकहाँ त सन्तान जन्माउने मात्र होइन, स्याहार गर्ने र हुर्काउने जिम्मा पनि आमाकै हुन्छ । यदाकदा बाबुले बच्चा काखमा लिए पनि दिसा–पिसाब गरिदियो भने अतालिँदै आमालाई पुकार्ने गर्छन् । बच्चाको स्याहार, उनीहरूको हुर्काइ सब आमाको जिम्मा हुन्छ । आमाहरू पनि आफ्ना पतिलाई ‘म बच्चालाई खाना खुवाउँदै छु, तिमीले उसका लुगा धोइदेऊ’ भन्ने हिम्मत गर्दैनन् । सँगै जागिर खान जाने जोडीहरूमा पनि महिलाले घरका सारा काम सकेर हतारहतार अफिस हिँड्नुपर्छ तर उसको लोग्ने बिहान श्रीमतीले तयार पारेको चियासँगै पत्रिकामा संसार चहारेर आरामले खाना खान्छ र अफिस जान्छ । श्रमितीले उसलाई भन्न सक्दिन, ‘बच्चालाई तयार पारेर स्कुलको गाडी चढाएर आऊ ।’ बरु यो जिम्मा पनि आफैंले लिन्छे किनकि उसमा यो सब भन्ने हिम्मत नै छैन । अपवाद कतै भेटिएछ भने निकै राम्रो हो ।
अचेल केही ‘पढालिखा’ बुहारीहरूले चाडबाडमा आफूहरू ‘लोग्नेको घर’ मा खालि चुलोचौका र जुठेल्नुमै घोटिनुपरेको अनि पुरुष सदस्यहरूले भने मोजमस्ती गरिरहेको गुनासो गरेको पढ्न–सुन्न पाइन्छ । तर यो सनातनी परम्परालाई तोड्न घरका पुरुष सदस्यलाई पनि घरभित्रको कामको बाँडफाँट गरिदिने हिम्मत गरेका कुरा कहीँकतै पढ्न–सुन्न पाइएको छैन । चाडबाडमा ‘म अचार बनाउँछु, तिमी मासु पकाऊ है’ भन्न सक्दैनौं । पकाउने जिम्मा महिलाले लिए पनि कम से कम ‘आफूले खाएका भाँडा आआफैं माझ्नू है’ सम्म भन्ने हो भने भान्साको बोझ आधा घट्छ । हामीकहाँ पुरुष, चाहे छोरा नै किन नहोस्, ऊ खाना खाई टेबलमै भाँडा छोडेर उठ्छ अनि महिला, चाहे छोरी नै किन नहोस्, उसले पुरुष सदस्यका जुठा भाँडा उठाउने र तिनले पोखेको जुठो सोहोर्ने गर्छन् । चुपचाप गरिने यस्ता कामले महिला स्वयंलाई कमजोर साबित गरिदिएका छन् ।
यदि हरेक घरका पुरुष सदस्यले आफ्ना जुठा भाँडा आफैं माझ्ने र आफ्नो जुठो आफैं सोहोर्ने संस्कारको विकास गर्ने हो भने चाडबाडमा मात्र होइन, कुनै पनि बेला घरमा आउने पाहुनासमेत आफूले खाएका जुठा भाँडा उठाउन बाध्य हुन्छन् । यसबाट एकातिर महिलाको काम आधा घट्छ भने, अर्कातिर अर्काले पोखेको जुठो घीन मानीमानी सोहोर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ । आज जुन घरमा महिलाले कामको भागबन्डा गर्ने हिम्मत गरेका छन्, जुन घरका पुरुषमा ‘मैले पनि घरभित्रको काम गर्न हुन्छ’ भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ, त्यो घरमा चाडबाड होस् या कुनै पनि बेला, ‘महिला मात्र घोटिनुपरेको’ गुनासो सुन्नुपर्दैन । तर हामी आफैं अपमानित हुने गरी पुरुष सदस्यलाई टाउकामा टेकाउँछौं अनि भन्छौं, ‘हामी हेपियौं, हामी पेलियौं ।’
के कहिल्यै हामीले आफ्नो भागको खुसी खोज्ने प्रयत्न गरेर हेरेका छौं ? आफ्नो खुसी रोज्ने प्रयत्न गरेका छौं ? अरू त अरू, आफ्नो रोजाइको लिपस्टिक लगाउन सक्दैनौं किनकि त्यो हाम्रो लोग्नेको रोजाइमा नपर्न सक्छ र सोध्छौं, ‘कुन रङको लगाऊँ ?’ आफ्नो रोजाइको लुगा लगाउन सक्दैनौं किनकि हामीलाई हाम्रो लोग्नेले ‘फलानो चीजमा तिमी राम्री देखिन्छ्यौ वा फलानो पहिरनमा तिमी संस्कारी देखिन्छ्यौ’ भनेको सुन्न मन पर्छ । के कहिल्यै हामीले आफैंलाई प्रश्न गरेका छौं, हाम्रा दुःख र कुण्ठाको कारण हामी आफैं त होइनौं भनेर ? कतै यो सब हाम्रै कमजोरीका कारण भइरहेको त होइन ?
प्रकाशित : मंसिर ११, २०७७ ०८:३८